Nepali Calendar - Nepali Patro - Bikram Sambat Calendar
Nepali Calendar – Nepali Patro | Mypatro
Nepali Calendar also know as Nepali Patro is web-based / online traditional Bikram Sambat Calendar. Nepali calendar is approximately 56 years and 8 months ahead of the English calendar known as Gregorian calendar(A.D.). In Nepali calendar, the new year usually falls in the middle of April. In Gregorian calendar, there seems to have fixed number of days inamonth but in case of Nepali calendar the days vary from 29 to 32 and cannot be predetermined and changes from year to year.
There are different web based application that have been integrated in this Nepali calendar. The most popular is date conversion i.e from A.D to B.S ,B.S to A.D and vice versa. There is alsoaupcoming Nepali event widget which helps to keep track of different upcoming Nepali festivals. There are also different widgets such as Forex, horoscope and all have been developed for the ease of user who use this website.
« 2074 B.S margh
2074 B.S chaitra »
सिधै जानुहोस > >
२०७४ फाल्गुन १०
महाशिवरात्रि / शिलाचह्रे पूजा १ 13 Trayodashi भ्यालेन्टाइन डे २ 14 Chaturdashi ३ 15 Aaunshi ग्याल्पो ल्होसार ४ 16 Pratipada ५ 17 Ditiya
६ 18 Tritiya प्रजातन्त्र दिवस ७ 19 Chaturthi ८ 20 Panchami ९ 21 Sasthi १० 22 Saptami चिरोत्थान (होलिकारम्भ) ११ 23 Aasthami शिक्षा दिवस १२ 24 Nawami
१३ 25 Dashami १४ 26 Ekadashi १५ 27 Dwadashi १६ 28 Trayodashi फागुपूर्णिमा (होली) १७ 01 Chaturdashi तराई होली १८ 02 Pratipada १९ 03 Ditiya
नाला मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा २० 04 Tritiya २१ 05 Chaturthi २२ 06 Panchami २३ 07 Sasthi नारी दिवसः २४ 08 Saptami २५ 09 Aasthami २६ 10 Aasthami
२७ 11 Nawami २८ 12 Dashami पापमोचनी एकादशी व्रत २९ 13 Ekadashi ३० 14 Dwadashi
२०७४-११-१ : महाशिवरात्रि / शिलाचह्रे पूजा
२०७४-११-४ : ग्याल्पो ल्होसार
२०७४-११-७ : प्रजातन्त्र दिवस
२०७४-११-१७ : फागुपूर्णिमा (होली)
२०७४-११-१८ : तराई होली
२०७४-११-२४ : नारी दिवसः
२०७४-११-२ : भ्यालेन्टाइन डे
२०७४-११-११ : चिरोत्थान (होलिकारम्भ)
२०७४-११-१२ : शिक्षा दिवस
२०७४-११-२० : नाला मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा
२०७४-११-२९ : पापमोचनी एकादशी व्रत
२०७४-फाल्गुन-६ : आइतवार
२०७४-फाल्गुन-११ : शुक्रवार
२०७४-फाल्गुन-१२ : शनिवार
२०७४-फाल्गुन-१९ : शनिवार
२०७४-फाल्गुन-२० : आइतवार
२०७४-फाल्गुन-२२ : मङ्गलवार
२०७४-फाल्गुन-२८ : सोमवार
२०७४-फाल्गुन-१३ : आइतवार
no date found for current month.
मेष - चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)बृष - इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)मिथुन - का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)कर्कट - हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)सिंह - मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)कन्या - टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)तुला - र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)बृश्चिक - तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)धनु - ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)मकर - भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)कुम्भ - गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)मीन - दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)
बच्चाहरु तपाईँको अनुसार काम गर्दैनन् - जसले तपाईंलाई उन्मादमा पार्न सक्छ। तपाईंले आफैंलाई सहनशील बनाउनु पर्नेछ किनकि अनियन्त्रित रिसले सामान्यतया सबैलाई र विशेष गरेर क्रोधी व्यक्तिलाई प्रहार गर्दछ र यसले आफ्नो ऊर्जाको नोक्सान हुन्छ र न्याय संकाय घट्दछ। यसले मात्र कार्यहरूलाई गाह्रो बनाउँछ।	तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्।	यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ।	निष्पक्ष र उदार प्रेमको लागि पुरस्कृत हुन सक्नुहुनेछ।	तपाईंको रीसाहा स्वभावले गर्दा कामको आफ्नो प्रगतिमा धेरै बाधा आउन सक्छ, धैर्य नगुमाउनुहोस।	बाटोमा उत्ताउलो ड्राइभिङ र जोखिम लिनु हुँदैन।	आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
असुविधाले तपाईंको मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ।	धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्।	साथीहरू, व्यापार सहयोगिहरु र आफन्तहरूसँग आफ्नो चासोको रक्षा गर्नुहोस - किनकि तिनीहरू तपाईंको आवश्यकता अनुसारको नहुन सक्छन्।	रोमान्स-सैर र पार्टीहरू रोमाञ्चक हुन्छन् तर धेरै गलाउने हुन सक्छन्।	स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्।	आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्।	आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको धैर्यको परीक्षा हुनेछ। कुराहरू नियन्त्रणमा राख्न शान्त रहनुहोस्।
रक्सी नपिउनुहोस किनकि यसले तपाईंको निद्रा बिगार्छ र राम्रो आराम लिनबाट रोक्न सक्छ।	लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ।	आफन्तहरूको घरमा भेटघाटको लागि छोटो यात्रा गर्नाले आफ्नो दैनिक व्यस्त तालिकाबाट सान्त्वना र विश्राम मिल्नेछ।	तपाईंको झ्यालमा फूल राखेर आफ्नो प्रेम देखाउनुहोस्।	अरूले तपाईंको धेरै समय माग गर्न सक्छन् - तिनीहरूलाई तपाईंले कुनै प्रतिबद्धता दिनुभन्दा अघि आफ्नो काम प्रभावित हुँदैन र तिनीहरूले तपाईंको दया र उदारताको फाइदा उठाउन खोज्दै छैनन् भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।	तपाईंको तेज अवलोकनले अरूको अगाडि पुग्ने मद्दत गर्नेछ।	तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
तपाईंको तेज कार्यले तपाईंको धेरै दिनदेखिको समस्या समाधान हुनेछ।	आर्थिक अनिश्चितताको विषयलाई लिएर तपाईंको मनमा तनाउ सिर्जना हुनेछ।	साँझ तिर अचानक आएको सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा आनन्द र खुशी ल्याउँछ।	तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् - पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्।	तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् - तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा - तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ।	तपाईंलाई सबैभन्दा गर्न मन लाग्ने कुराहरूको सामाजिकरण र पालनको लागि आज समय छ।	तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
कमजोर शरीरले मनलाई पनि कमजोर बनाउँछ, त्यसैले ऊर्जा प्राप्त गर्न पूर्ण आराम गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो साँचो क्षमता महसुस गर्नुपर्छ किनकि तपाईंमा बलको होइन तर इच्छाको कमी छ।	नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन् - पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्।	आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लाभको लागि सकारात्मक सोचाइले आफ्नो शक्ति र विभिन्न सुझावहरू दिएर आफ्नो उपयोगिताको विकास गर्नुहोस्।	आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्नुहोस्, यसले तपाईंको प्रेम सम्बन्धलाई खतरामा पार्न सक्छ ।	तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने - तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ।	आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्।	कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
जीवन रमाइलो पार्न आफ्नो आकांक्षाहरूको जाँच गर्नुहोस्। योगको मदत लिनुहोस् - जसले तपाईंलाई आफ्नो स्वभाव सुधार गर्न शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तवरमा स्वस्थ भएर बाँच्ने कला सिकाउँछ।	अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्।	तपाईंलाई कसैले पार्टीमा ठट्टाको पात्र बनाउन सक्छन्। तर तपाईंलाई पछि केही समस्यामा पार्न सक्ने कुनै पनि कठोर प्रतिक्रियाबाट जोगिनको लागि आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोस्।	तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्।	काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ।	कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण प्रमाणित हुनेछ।	आज आफ्नो शानदार जोडीको न्यानोसँग तपाईंलाई रोयल्टी झैं महसुस हुनेछ।
हावामा महल निर्माण गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुने छैन। तपाईंले परिवारको आशा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ।	बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ - त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। एउटा शिशुको स्वास्थ्यसे केही चिन्ता हुनेछ।	कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ।	खुशीसँग व्यापार नमिसाउनुहोस्।	तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्।	तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
तपाईंको जीवन मित्र र परिवारका सदस्यहरूलाई पूर्ण जस्तो लाग्न सक्छ - तर तपाईं केही हालका विकासहरूमा विचलित हुनुहुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ।	आफ्ना पाहुनाहरूसँग अशिष्ट नहुनुहोस्। तपाईंको व्यवहारले आफ्नो परिवारमा समस्या मात्र होइन, सम्बन्धमा पनि शून्यताको सिर्जना गर्न सक्छ।	प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न।	यदि तपाईंले लामो समयदेखि काममा कसैसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ भने, आज तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नु हुनेछ।	पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ।	आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग प्रेम गर्ने प्रशस्त समय पाउनु हुनेछ, तर स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ।
रचनात्मक सोखले तपाईंलाई तनाउमुक्त राख्नेछ।	लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने।	तपाईंका जोडीको मूड धेरै राम्रो नभए झैं लाग्दैछ, यसैले कुराहरू सही तरीकाले संचालन गर्नुहोस्।	वेब डिजाइनरहरूको लागि धेरै राम्रो दिन हो। तपाईंको चम्किने सम्भावना भएकोले आफ्नो सबै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। कसैलाई विदेशी अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ।	व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्।	एउटा अपरिचितले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच झगडा हुन सक्छ।
राम्रो स्वास्थ्यको कारण तपाईं खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनुहुनेछ।	\_"आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्।\_"	छोरीको रोगले तपाईंको मुड बिगार्ने छ। उनलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउन आफ्नो प्रेम दिनुहोस्, जसले उनको हौसला बढाउनेछ। प्रेमको शक्तिमा निको पार्ने ठूलो शक्ति लुकेको हुन्छ।	तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ।	तपाईंले आज काममा राम्रो ध्यान दिनुभएन भने, तपाईंका वरिष्ठ र सहयोगिहरु बीच आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउनु सक्नु हुनेछ।	आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्।	आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्।	तपाईंको अव्यावहारिक योजनाले धनको कमी गराउनेछ।	आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्।	आफ्नो प्रेमीको अनावश्यक मागलाई ध्यान नदिनुहोस्।	तपाईंको रीसाहा स्वभावले गर्दा कामको आफ्नो प्रगतिमा धेरै बाधा आउन सक्छ, धैर्य नगुमाउनुहोस।	आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ।	तपाईंले आज एउटा ठूलो भूल गर्नुहुनेछ जसले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा हानि पुर्याउन सक्छ।
बाहिरी गतिविधिहरूले तपाईंलाई लाभ दिनेछन्। गढ जीवन शैली मन पराउनु र सधैं सुरक्षा बारे सोचले तपाईंको शारीरिक साथै मानसिक उन्नतिमा हानि पुर्याउनेछ। यसले तपाईंलाई एउटा त्रसित व्यक्ति बनाउनेछ।	निवेश गर्न र अनुमान लगाउनको लागि राम्रो दिन होइन ।	बच्चाहरुसँग भएको असहमतिले तर्क र निराशा ल्याउनेछ।	आफ्नो प्रेमी जीवनमा तीतो तुच्छ कुराहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्।	तपाईं विदेशी जागिरको लागि आवेदन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने - आज राम्रो दिन जस्तो देखिन्छ।	यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ।	के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
२०७४-१२-३ : घोडे जात्रा
२०७४-१२-८ : विश्व पानी दिवस
२०७४-१२-९ : विश्व मौसम दिवस
२०७४-१२-१० : विश्व क्षयरोगविरुद्ध दिवस
२०७४-१२-११ : रामनवमी
1943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033 JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
२०००२००१२००२२००३२००४२००५२००६२००७२००८२००९२०१०२०११२०१२२०१३२०१४२०१५२०१६२०१७२०१८२०१९२०२०२०२१२०२२२०२३२०२४२०२५२०२६२०२७२०२८२०२९२०३०२०३१२०३२२०३३२०३४२०३५२०३६२०३७२०३८२०३९२०४०२०४१२०४२२०४३२०४४२०४५२०४६२०४७२०४८२०४९२०५०२०५१२०५२२०५३२०५४२०५५२०५६२०५७२०५८२०५९२०६०२०६१२०६२२०६३२०६४२०६५२०६६२०६७२०६८२०६९२०७०२०७१२०७२२०७३२०७४२०७५२०७६२०७७२०७८२०७९२०८०२०८१२०८२२०८३२०८४२०८५२०८६२०८७२०८८२०८९२०९० बैशाखजेष्ठआशादश्रावनभाद्रआस्विनकार्तिकमङसिरपुषमार्गफाल्गुनचैत १२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२
Exchange Rate for 22 February 2018
Indian Rupee 100 Rs.160.00 Rs.160.15
U.S. Dollar 1 Rs.103.32 Rs.103.92
European Euro 1 Rs.127.26 Rs.128.00
UK Pound Sterling 1 Rs.143.80 Rs.144.64
Swiss Franc 1 Rs.110.19 Rs.110.83
Australian Dollar 1 Rs.81.13 Rs.81.60
Canadian Dollar Rs.81.61 Rs.82.08
Singapore Dollar 1 Rs.78.21 Rs.78.66
Japanese Yen 10 Rs.9.61 Rs.9.67
Chinese Yuan 1 Rs.16.27 Rs.16.37
Saudi Arabian Riyal 1 Rs.27.55 Rs.27.71
Qatari Riyal 1 Rs.28.38 Rs.28.54
Thai Baht 1 Rs.3.28 Rs.3.30
UAE Dirham 1 Rs.28.13 Rs.28.29
Malaysian Ringgit 1 Rs.26.47 Rs.26.62
South Korean Won 100 Rs.9.63 Rs.9.68
Swedish Kroner 1 Rs.12.76 Rs.12.83
Danish Kroner 1 Rs.17.09 Rs.17.19
Hong Kong Dollar 1 Rs.13.20 Rs.13.28
Kuwaity Dinar 1 Rs.344.44 Rs.346.44
Bahrain Dinar 1 Rs.274.05 Rs.275.64
Source NRB Exchange
© 2018 Maintained by Saroj Shrestha